admin – Kalika Khabar
February 18, 2018 adminLeaveaComment on संसदिय दलको नेतामा प्रचण्ड निर्वाचित
६ फाल्गुन २०७४,काठमाडौं। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर ढिलोचाँडो प्रधानमन्त्री बन्ने उद्घोष गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्प कमल दाहाल `प्रचण्ड´ आज पार्टी संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका छन् । प्रचण्ड संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएसँगै माअ‍ोवादीभित्र प्रधानमन्त्रीका दावेदार प्रचण्ड मात्र छन् । आज बसेको माअ‍ोवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई सम्सदिय दलको नेतामा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको […]
February 16, 2018 adminLeaveaComment on बाहिर आएको हल्लामा सत्यता छैन: प्रचण्ड
४ फाल्गुन २०७४,काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बाम कम्युनिस्ट पार्टीका सह-अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ले पहिलो चरणमा माओवादी सरकारमा सहभागि नहुँदा बाहिर आएका हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् । शुक्रबार भएको शिक्षक संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड ले पार्टी एकता र सरकार गठनका सम्बन्धमा अएका समचारहरु गलत भएको बताएका छन । एक […]
February 16, 2018 adminLeaveaComment on मनमोहनले देखाएको सपना पूरा गर्छु: प्रधानमन्त्री
४ फाल्गुन ३०७४,काठमाडौं। भर्खरै प्रधानमन्त्री पद सम्मालेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले देखाएको सपनाहरुलाइ पूरा गर्ने बताएका छ्न। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष अधिकारीले उठाएको कुरालाइ आफूले निरन्तर्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार ललितपुरको सानेपास्थित रहेको मनमोहन अधिकारीको शालिकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै एमाले […]
February 15, 2018 adminLeaveaComment on केपि ओलिप्रती शेर बजारको आश: दीर्घकालीन कि अल्पकालीन ?
३ फाल्गुन २०७४,काठमाडौं। बाम गठबन्धनको नेतृत्व गरेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। ओलिको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भए लगत्तै तिब्र गतिमा शेयर बजार उकालो लागेको छ । बुधबार साँझ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम सूची राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि बढेको राजनीतिक माहोलले नेप्सेमा पनि तिब्र वृद्धि आएको हो । लमो समयदेखि […]
February 15, 2018 adminLeaveaComment on राष्ट्रपतिको चुनाव फाल्गुन २१ गते
३ फागुन २०७४, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख पाँच राजनीतिक दलसँग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धनमा औपचारिक छलफल सुरु गरेको हो । छलफलमा आयोगले फागुन २१ गते राष्ट्रपति र चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने मिति समेत […]
February 15, 2018 adminLeaveaComment on ४१ औ प्रधानमन्त्रीमा केपि ओलि नियुक्त
३ फागुन २०७४, काठमाडौं । आज नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ओलि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै नेपालको ४१ औ प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका हुन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले […]
बाम एकता: १११ केन्द्रिय कमिटी
३ फाल्गुन २०७४,काठमाडौं। बाम गठबन्धनमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी केन्द्रको पार्टी एकता हुने भएको छ। एकीकृत पार्टीमा दुइ सह अध्यक्ष हुने छ्न भने ११ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ४३ सदस्यीय पोलिट्ब्युरो रहनेछ्न र १११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने छ। साङठानिक ढाचा अनुसार सह-अध्यक्षहरु १. नेकपा एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा अोली […]
तत्काललाइ माओबादी सरकारमा सहभागी नहुने।
February 15, 2018 adminLeaveaComment on तत्काललाइ माओबादी सरकारमा सहभागी नहुने।
३ फाल्गुन २०७४, काठमाडौं । बुधबार एमाले र माओवादीबीच सरकार गठन विषयमा भएको छलफलपछि माओवादी केन्द्रले तत्कालै सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको हो । एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश १ मा सरकार बनाउने तयारी भईरहेबा बोल मन्त्रालयका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि माओवादीले सहभागी नहुने बताएको छ । माओवादी केन्द्र मोरङ ईन्चार्ज कुशल लिम्बुले मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको भन्दै सरकारमा […]
आलोपालो प्रधानमन्त्री: ओलि ३ बर्ष, प्रचण्ड २ बर्ष
February 15, 2018 adminLeaveaComment on आलोपालो प्रधानमन्त्री: ओलि ३ बर्ष, प्रचण्ड २ बर्ष
३ फाल्गुन २०७४, काठमाडौं । एमाले र माओवादीबीच ओली र प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति पनि जुटेको बताइएको छ । तथापि आलोपालो सरकार चलाउने माओवादी प्रस्तावमा एमालेभित्र केही असन्तुष्टि छ । माओवादी नेताहरुले भने भद्र सहमति भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेभित्र केही नेताहरु आलोपालोको विपक्षमा रहे पनि यद्यपि वाम गठबन्धनका सुत्रधार एमाले उपाध्यक्ष […]
February 14, 2018 adminLeaveaComment on दर्शन नेपाल युनिट्ले फरक तरिकाले भ्यालेनटाइन मनायो।
२ फाल्गुन २०७४, चितवन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रेम दिवस को उपलक्ष्यमा दर्शन नेपाल युनिटले भिन्न तरिकाले प्रेम दिवस मनाएको छ । अहिलेको समयमा नेपालमा प्रेम दिवस लाई विभिन्न नकारात्मक सोचले हेर्ने गरिएको छ ।भए गरेका बिकृतीहरुलाई सुधार गर्नु पर्छ भनी दर्शन नेपाल युनिटले भिन्न किसिमको कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। प्रेमी प्रेमिका बिच रासलिला ,गाला चाटाचाट गरेर होइन, […]